Welcome Email Marketing Blog onye nkwado Delivra! | Martech Zone
Nabata Email Marketing Blog onye nkwado Delivra!
Nke a abụrụla ọnwa tara akpụ na ọnwa na-enweghị atụ maka Martech! Anyị mechiri Septemba na 233% uto na Septemba gara aga na blọọgụ ma anyị na-aga n'ihu ịnweta ụda nke ngosipụta ụlọ ọrụ. Tinyere nkwado Zoomerang nke teknụzụ anyị (gaa leta ha maka ndụmọdụ nyocha n'ịntanetị!), Anyị nwere obi ụtọ ịkpọsa Delivra dị ka onye na-akwado Email Marketing!
Delivra bụ otu n'ime ndị mbụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa email na nso nso a aha ya bụ Inc. 5000! Onu ogugu a na-amata ikike Delivra n’inweta ego siri ike ma na-ejikwa azụmaahịa na-eto eto ma na-emepe atụmatụ azụmaahịa na-aga nke ọma.
Nke a bụ ohere dị egwu maka Delivra na Martech Zone. N'ịbụ onye guzosiri ike na 1999, Delivra nwere aha pụtara ìhè na ụlọ ọrụ maka ịbụ ụlọ ọrụ na-eche banyere ndị ahịa ya ma na-eme ihe ziri ezi mgbe niile. Delivra na-bụ enweghị ụgwọ, nke ndị mmadụ nwe ma na-azụ ahịa dị na etiti Midwest - na ụkpụrụ ụlọ ndị dị ala ịkwụwa aka ọtọ, iguzosi ike n'ihe, na ịrụsi ọrụ ike jupụtara nzukọ. Ha enweghị ndị na-eme ihe ike, ndị na-ere ahịa na-ere ahịa… naanị ndị ọrụ na-ahụ maka ọdịmma nke na-ejide n'aka na a na-elebara mkpa gị anya ma na-egbo mkpa email gị.
N'ime izu ole na ole sochirinụ, anyị ga-akwaga akwụkwọ akụkọ anyị kwa izu (denye aha n'elu) gaa Delivra ma nwedịrị ike ịme ka anyị na ha nwee mmekọrịta dị mma nke anyị ga-ahapụ ụwa! Nakwa, anyị ga - enwe ndị na - ede blọgụ Delivra ole na ole ga - eweta ọtụtụ ndụmọdụ ahịa email na omume kacha mma!
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ọrụ teknụzụ azụmaahịa ma nwee mmasị na anyị na ha na-akwado anyị, anyị ka nwere ụfọdụ ọwa mepere: Analytics, CRM, ecommerce, Mobile Marketing, Social Media, content Marketing, na WordPress nkwado na-emeghe!
Na-akwadebe maka 2020 Workforce
Ọnụ Ahịa Ahịa Ahịa Bara Uru site na Ngwaọrụ Ahịa
Ọkt 3, 2011 na 4:47 PM
Daalụ, Doug! Obi dị anyị ụtọ iso ezinụlọ ndị na-ere ahịa Tech Tech!
Ọkt 3, 2011 na 4:52 PM
Hey! Amaara m gị… 🙂
Ọkt 4, 2011 na 9:14 AM
Nnukwu ìgwè n'ebe ahụ na Delivra! Obi dị m ụtọ ịhụ na gị na ha na-arụkọ ọrụ Doug. Na-atụ anya ịhụ njedebe nsonaazụ…